Hissho Sushi Careers - Hissho Sushi
ကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်မှာလူကြီးများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ Hissho အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့် franchisees များသည်“ ကြီးမြတ်ရန်၊ ဤအတွေးအခေါ်သည်အလုပ်ခွင်မှအသိုင်းအဝိုင်းအထိကျယ်ပြန့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအတွေ့အကြုံကိုပေးအပ်ရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအားလုံး၏ဘဝကိုကြွယ်ဝစေရန်ဖြစ်သည်။
မဖြစ်နိုင်တာကိုရရှိရန်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အားပေးပါ
ကိရိယာများ၊ လေ့ကျင့်မှုများနှင့် - အရေးအကြီးဆုံးမှာ - လွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လွတ်လပ်မှုရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အမြင့်သို့ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားသည်။ တစ်ခါတလေကျွန်ုပ်တို့ကမဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာအမြဲတမ်းထမြောက်လာခဲ့သည်။
Inspire & Inspir လုပ်ပါ
နေ့တိုင်းကြီးကြီး။ သေးငယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ခြားနားအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်သဘောထားသည်သင်သိခဲ့ဖူးသမျှထက် ပို၍ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ခက်ခဲသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထိုတွင်ရောက်ရှိရန်အတွက်အမြဲပျော်စရာကောင်းသည်။
Exude သနားကြင်နာမှု & နှိမျ့ခခြွငျး
ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တာကိုငါတို့သိတယ်။ ဒါကြောင့်ကြင်နာမှု၊ ဂရုစိုက်မှုနဲ့ကူညီပေးလိုစိတ်ရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့အသင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့သော့ချက်ဖြစ်တယ်။ အတ္တမရှိလမ်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌များစွာလုပ်ဆောင်စရာရှိသည်။
ခင်ဗျားရဲ့လိပ်စာလိုအသံမျိုးလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျခစျြတယျ အောက်ဖော်ပြပါပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပါ၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သတ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေပါ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုတင်ပါ။
ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့သည်လည်းငါတို့ဖွင့်ရှာဖွေ & အွန်လိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလှိမ့်ပုံ Takin 'စောင့်ရှောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်သည် Charlotte, NC တွင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ချက်ပြုတ်နည်းများမှသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအထိအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။
Hissho Sushi သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် franchisees များအတွက်အကြံဥာဏ်သစ်များနှင့်ဆန်းသစ်သောရွေးချယ်စရာများကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းရန်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေသည်။
ဘာကြောင့်လဲသိလား လူတိုင်း Hissho ဆူရှီကိုနှစ်သက်တယ်
ကျွန်မဆူရှီကိုနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ဒေသခံကုန်စုံဆိုင်ကနေအရသာကောင်းတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဆူရှီတွေရရှိနိုင်တာကိုနှစ်သက်တယ်။ yum!
အရင်ကဆူရှီမရှိခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်စပ်တူနာငါးလိပ်ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံ Meijer မှာနေရာချထားတယ်။ ကျိန်းသေကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြိုးစားရန်ပြန်သွား။
အကောင်းဆုံးအစားအစာ။ လတ်ဆတ်တဲ့အရသာ။ ကြီးမြတ်တင်ဆက်မှု။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း!
Charlotte Airport တွင်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဆူရှီလိပ်စာကိုကျွန်ုပ်၏အိပ်ရာခင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်ကိုသင်ယုံကြည်မည်လော။ တောင်ပိုင်း Charm ဆူရှီ Roll!
Uptown ၏အကောင်းဆုံးဆူရှီများကို Hissho Sushi နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတာဂုဏ်ယူပါသည်။ ဒီနေ့ရပ်ပါ
ဆူရှီကိုကြိုက်တယ် မန်နေဂျာများကစူပါအထောက်အကူများနှင့်အမြဲသူတို့ရဲ့ဂိမ်းထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ကြသည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်